စာပေခရီးနီးသလား...(၄) | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ဆောင်းပါး » စာပေခရီးနီးသလား...(၄)
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 6:38 AM
Posted by မိုးသက် at 6:38 AM Read more
Snow May March 24, 2012 at 10:45 AM
အပိုင်း (၄) လာဖတ်သွားတယ်မောင်လေးရေ. ကျောင်းတုန်းက တစ်ကယ်မသင်ဖူးခဲ့တော့.. ကဗျာအကြောင်းကို သိပ်မသိတာ အခုမှပဲ တီးမိခေါက်မိရှိလာရပြီ. ကျေးကျေးပါ. :)
ကဗျာက ကျောင်းတုန်းက ဖတ်ခဲ့တယ်..ခုမှ ရေးနည်းလေ့လာရာတာ..ဆရာမ သားကိုလည်း သင်ပေးနော်..ခိခိ
mstint March 25, 2012 at 12:06 AM
စံပယ်ချို March 30, 2012 at 9:42 AM